Muqdisho oo maanta laga xusayo Afgambigii fashilmay ee Turkiga oo sanad laga joogo | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia - Muqdisho oo maanta laga xusayo Afgambigii fashilmay ee Turkiga oo sanad laga joogo
Muqdisho oo maanta laga xusayo Afgambigii fashilmay ee Turkiga oo sanad laga joogo
July 15, 2017	18 Views
Muqdisho: Sanad ayaa ka soo wareegatay markii uu fashilmay afgambi la doonaayay in dalka Turkiga ay ku qabsadaan ciidamada Militariga dalkaasi, waxaana munaasabad arintaasi loogu dabaaldagaayo maanta ay ka dhaceysaa Magaalada Muqdisho.
Shacabka dalka Turkiga ayaa habeen Sabti ah sanad ka hor muujiyay dareen wadaninimo, kadib markii ay si adag uga soo horjeesteen qorshe ciidanka Militariga ay ku doonayeen inay xukunka uga tuuraan Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan.
Safiirka Dowladda Turkiga ee Muqdisho u fadhiya Olgen Beiger ayaa Suxufiyiinta ugu sheegay Magaalada Muqdisho munaasabad maanta ka dhaceysa Xarunta Safaarada Dalka Turkiga ee Degmada C/casiis inay ka qayb gali doonaan Madaxda ugu sareysa Dowladda.
Dowladda Turkiga oo maanta si weyn u xuseysa sanad guurada koowaad ee afgambigii fashilmay ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in shaqada laga ceyriyay 7,000 oo Shaqaale ka ahaa Dowladda.
Dowladda Turkiga ayaa qaaday tallaabooyin kala duwan oo ay kaga jawaabaysay ficilkaasi dhacay, waxaana ay xir xirtay kumanaan ka tirsan ciidamada kala duwan ee dalka Turkiga oo lagu eedeeyay inay wax ka maleegeen qorshahaasi, sidoo kale waxaa la xiray Saraakiil badan oo ciidamada ka tirsan, qaarkoodna shaqada laga ceyriyay.
Madaxweynaha dalka Turkiga oo qaatay go’aan geesinimo leh, ayaa aad ugu hambalyeeyay shacabka dalkiisa ee muujiyay dareenka wadaninimada leh, islamarkaana si weyn kaga hortagay qorshihii fashilmay ee afgambiga.